ကလေးရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမှုကို နားလည်ခြင်း - Chit MayMay
Home Child Care ကလေးရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမှုကို နားလည်ခြင်း
ကလေးရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမှုကို နားလည်ခြင်း
ကလေးအများစုက သူတို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို မစဉ်းစားဘဲ ပြောတတ်၊ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ဒီလိုလွှတ်ခနဲပြောတတ်လုပ်တတ်တဲ့ ကလေးတွေကို အလိုလိုက်ထားလို့ ဆိုးနေတဲ့ ကလေး၊ အလေးမထားတတ်တဲ့ကလေး၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကလေးရယ်လို့ မကြာခဏ မြင်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ အဲ့လိုစိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုမှုရှိတဲ့ ကလေးတွေ အကြောင်းနဲ့ ကလေးတွေကို ချုပ်တည်းမှုရှိအောင် ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကလေးတွေဟာ သူတို့စိတ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ မေမေတို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာ ကြားဖြတ်ဝင်ပြောတာမျိုး၊ ခွင့်မတောင်းဘဲ ပစ္စည်းတွေယူကိုင်တာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘောလုံးလိုက်ကောက်ဖို့ လမ်းကိုဖြတ်ကူးတာမျိုးက သူတို့မှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုက ဘယ်အရာနဲ့ တူသလဲ?
ကလေးတစ်ယောက် စိတ်လိုက်မာန်ပါပြုလုပ်တဲ့အခါ အဲဒါက ကလေးသဘာဝပဲလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် impulsive behaviors တွေကို ကျွန်မတို့ မကြာခဏတွေ့မြင်နေရရင် အမြင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်၊ ဒါက သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တာကို ကျွန်မတို့ သတိပြုမိလို့ပါပဲ။
ကလေးတွေအားလုံးမှာ တူညီတဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုရှိတတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအပြုအမှုတွေက ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မတူကွဲပြားပြီး အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့ အပြုအမှုအချို့မှာ-
စကားပြောတဲ့အခါ (သို့) ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ သူတို့အလှည့်ကို မစောင့်နိုင်ခြင်း
အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိဖို့ မသင့်လျော်တဲ့ အရာများပြုလုပ်ခြင်း
စည်းကမ်းချက်တွေကို တသမတ်တည်း လိုက်နာဖို့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိခြင်း
အခြားကလေးတွေကို ရန်လိုခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း၊ ကန်ခြင်း၊ ရိုက်ခြင်း
သူတို့ရဲ့ စကားတွေ, အပြုအမှုတွေက သူတစ်ပါးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တာကို နားမလည်ခြင်း
အမှားတွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ စိတ်ပျက်မှုတွေကို တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲခြင်း
သူတို့လုပ်ရပ်တွေမှာ အကျိုးဆက်တွေရှိတာကို နားမလည်ခြင်း
အသက် ၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်မှာ ၆နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လို အပြုအမှုမျိုးတွေ မြင်တွေ့ရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ self-control ရင့်ကျက်ခြင်းမရှိသေးလို့ပါ။
ဘယ်အရာက ကလေးတွေမှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလဲ?
ကလေးတစ်ယောက်မှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုကို ဖြစစေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
၁။ ရင့်ကျက်မှု မရှိခြင်း
သူတို့ရဲ့ ရင့်ကျက်မှုက တခြားကလေးတွေထက် နောက်ကျရင် ဒီလိုအပြုအမှုတွေ ပြုမှုတတ်ကြပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဒါက သူတို့မလုပ်ဆောင်ခင် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနှင့် ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
၂။ စိတ်ဖိစီးမှုရှိခြင်း၊ အားမလိုအားမရဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်စက်မှုမရှိခြင်း
တကယ်လို့ ကလေးတွေဟာ ကျောင်းမှာ (သို့) မိသားစုထဲမှာ ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ လူကြီးတွေလို သူတို့ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်လိုဖော်ပြရမယ်ဆိုတာ မသိကြောင်း မမေ့ထားသင့်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ ထိုစိတ်တင်းကျပ်မှုကို စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုတွေနဲ့ လွှတ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
၃။ ADHD ရှိတဲ့ကလေးတွေဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုတွေကို လုပ်တတ်ကြပါတယ်
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) ဝေဒနာခံစားရတဲ့ ကလေးတွေမှာ အထူးသဖြင့် ဒေါသကဲ့သို့သော ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းညှိနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အခက်တွေ့နို်ငပါတယ်။
၄။ Phobias နှင့် စိတ်ဝေဒနာတွေ
အချို့သော စိတ်ဝေဒနာတွေက ကလေးငယ်တွေအတွက် စိတ်မရှည်သော အပြုအမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေမှာ ဒီအပြုအမှုမျိုး ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ကို ပံ့ပိုးပေးဖို့နှင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုတိုးလာအောင် ကူညီဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက သူတို့ကို ပိုမိုရင့်ကျက်တဲ့ ခံစားမှုရှိစေပြီး မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုကို တိုးပွားစေပါတယ်။
သူတို့မှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုတွေရှိနေရင် ဘယ်လိုကူညီမလဲ?
ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ကူညီဖို့ ကျွန်မတို့လုပ်သင့်တာက အိမ်မှာ သူတို့ဘယ်လိုပြုမှုတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါအပြုအမှုနောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတစ်ချို့က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ၊ သင်အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းဗျူဟာ အချို့ရှိပါတယ်။
self-control တိုးတတ်စေဖို့ နည်းစနစ်တွေ
ကလေး စိတ်ပျက်စရာကြုံတဲ့အခါ စာနာမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်း
စိတ်လိုက်မာန်ပါထိန်းချုပ်မှု skill ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်း
ဒီအလေ့အကျင့်တွေနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ self-control ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုဖို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ ထူးခြားပြီး သီးသန့်ဖြစ်တည်ပါတယ်။ ချုပ်တည်းမှုစွမ်းရည်ကို ရိုးရှင်စွာ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကလေးရဲ့အပြုအမှုတွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ မိဘတွေဆိုတာ ကလေးတွေရဲ့ လမ်းပြတွေဖြစ်သလို စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲတမ်း စာနာမှုပြပြီး သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုစီကို ဂုဏ်ပြုပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ self-esteem ကိုပိုအားကောင်းစေပါတယ်။
Previous articleသင့်ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအပေါ် အံ့သြစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းထက်အစားအစာ (၄)မျိုး
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ အရိုးကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ?